Baqattoonnii Eertiriyaa Itiyoophiyaa keessa jiran akka rakkachaa jiran gabaasame
Bitootessa 15, 2022
FAAYILII - Bakka buufata baqattoota Ertiraa itti ijaaruuf karoorfame irra ijoollee dhadhaabbattu, Daabat,Naannoo Amaaraa, Adoolessa 13, 2021
Baqattoonii Eertiriyaa Itiyoophiyaa keessa qubatanii jiran haleellaa hidhattootaa fi beelaan rakkachaa akka jiran dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibisaa jiru. Dhaabbataa mootummoota gamtoomaniitti waajjiri qindeessaa dhimmaa gargaarsa namoomaa OCHAn akka jidhutti, ji’a darbee bakka Barahilee jedhamu keessatti kan argamuu mooraa baqattootaa irratti haleellaa hidhattootaan raawwatameen baqattoonnni Shan ajjeefamaniiru.
Dhaabbataa mootummootaa gamtoomaniitti komoshiinii dhimmaa baqattootaa UNHCRf dubbii himtuu baha Afrikaa kan ta’an Faatii Kaasiimaa, baqattoonni Eertiriyaa wareen Mooraa keessa turan, mooraa gad lakkisaanii bakka nageenyaa isaaniif mijataa ta’eti faffaca’aa jiru jedhaniiru.
Akka qorataan dhaabataa mirgaa namoomaa Aminesitii Internaashinaal kan gaanfaa Afrikaa Fesehaa Teklee jedhanitti immoo baqattoonni Eertiriyaa hedduun daangaa Ce’uudhaan garaa Keeniyaa fi Ugaandaatti imalaa jiru. Kanneen keessas daangaa Itiyoophiyaa fi keeniyaa Irratti qabamanii mootummaa keeniyaatiin kan hidhaman heedduu akka ta’an ibsameera.
Baqattoonni Eertiriyaa kuma 140,000 ta’an Itiyoophiyaa keessa naannoo Tigraayii qubatanii turan, ergaa walwaraansi jalqabamee as gara kibbaatti baqachuudhaan naannoo Affar fi Amaaraa keessaa akka qubachuuf dirqisifaman kan hima haanga’oonni dhaabilee gargaarsaa namoomaa wan karaan cufaa ta’eef baqattootaa fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuun akka rakkisaa ta’e ibsaa jiruu.
Dhaabbataa Mootummootaa gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa akka jedhetti, dhiheenyaa kana nyaataa qaamaa namaa jabeessan fi qorchaa meetiriik toonii 100 Tigiraay keessatti raabsameera. Gargaarsii kun namoottan biroo kuma 10,000 fi baqattootaa kuma 22,000 akka qaqqabee gabaasameera. Warreen naannoolee Afaari fi Amaaraa keessa jiran kuma 190,000 gargaarsaa kana argachuu isaaniis gabaasameera.
Ejensiin gargaarsaa namoomaa Dhabbata Mootummoota gamtoomanii kaabaa Itiyoophiyaa keessatti namootan gargaarsii barabaachisu kuma 870,000 ta’an qaqqabuudhaaf akka danqamee jiru beekissiseera.
Afaar Keessatti Mooraan Baqattootaa Kan Yeroo Ijaaramuuf Jira